Dagaal Iyo Kamiin Ka Dhacay Gobalka Shabeelada Hoose. – Bogga Calamada.com
Dagaal Iyo Kamiin Ka Dhacay Gobalka Shabeelada Hoose.
Wararka naga soo gaaraya taliska ciidamada mujaahidiinta wilaayada Sh.hoose ayaa ku waramaya in dagaal qorsheysan ay ciidamada mujaahidinta ku qaadeen salaadi maghrib kadib difaacyada maleeshiyaadka murtadiinta ay kuleeyihiin gudaha degmada Qoryooley.
Dagaal mudo kooban socday kadib maleeshiyadka murtadiinta ayaa bilaabay in ay cagta ka furaan difaacyadii ay kaga sugnaayeen gudaha magaalada iyadoo u firxday dhanka xerada ay dagan yihiin askarta kuffaarta afrikaanta ee duleedka degmadaasi.
Ciidanka mujaahidinta oo ku raad joogay maleeshiyaadkii firxaday ayaa uga dabatagay xeradii ay nafta bideen, dagaal faraha la iskula tagay ayaa markale ka dhacay gudaha xerada afrikaanta oo markaasi ay kuwada sugnaayeen maleeshiyaadka iyo gaaladii horey udaganeed.
Ciidanka mujaahidiinta ayaa la wareegay gacan kuheynta mudo saacado ah degmadaasi Qroyooley, sarkaal katirsan ciidanka mujaahidiinta ayaa inoo xaqiijiyay in goor dhow oo hada ah ay ciidamada kasoo baxeen magaaladasi kadib markii uu guuleystay qorshihii dagaalka.
Geesta kale weerar dhabo gal ah ayaa maanta duhuradii kadhacay afaafka hore ee degmada Afgooye,jabhada dagaalka mujaahidiinta wilaayada Sh.hoose oo la socday dhaq dhaqaaqa cadowga alle ayaa dhabaha u galay ciidamo lugeynayay oo kasoo baxay Afgooye kuwaasi oo kusii jeeday Buulo-Foolo duleedka degmadasi si ay halkaasi udhigtaan isbaaro ay dadka uga qaataan lacago baad ah.
Markii cadowga ay kasoo dhamaaden Afgooye oo ayna soo gaarin fariisinkoodi ayay la kulmeen rasaas uga timid dhinacyo kala duwan, israsaseen mduo socotay kadib cadowga iyagoo baqo carar ah ayay dib ugu laabteen xeryaha ay kadagan yihiin Afgooye.
Howlgalladan ka kala dhacay degmooyinka Afgooye iyo Qoryooley wixii kusoo kordhaa dib ayaan kasoo gudbin doona Insha Alalh.